प्रचण्ड-माधव समूहमा भुइँचालो , ओली समूहमा जान योगेश भट्टराईको यस्तो तयारी ! - Compaq News
प्रचण्ड-माधव समूहमा भुइँचालो , ओली समूहमा जान योगेश भट्टराईको यस्तो तयारी !
काठमाडौं । प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता योगेश भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपामा प्रवेशको तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनेवित्तिकै भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको समूहमा जाने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
भट्टराईले आफू निकटका केही नेताहरूसँग ओली समूहमा जानेबारेमा छलफल गरेको एक नेताले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईलाई आफूले जिताएर ल्याएर मन्त्री बनाएको बताएका थिए ।
ओली असन्तुष्ट भएपछि भट्टराईले प्रचण्ड–माधव समूह छाडेर ओली समूहतिर जाने विषयमा छलफल चलाएका हुन् ।
योगेश भट्टराई भन्छन्- राजनीतिमा मध्यमार्ग हुँदैन, मत दिने बेला भाग्दिनँ
पर्यटन मन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले राजनीतिमा मध्यमार्ग नहुने बताएका छन्।
नेकपा भित्रको विवादबारे आवश्यक परेको बेलामा एकतिर उभिनै पर्ने बताए।
‘हामीजत्तिको मान्छेले के भन्नुपर्छ भने राजनीति प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिमा कहाँ हुन्छ मध्यमार्ग? तपाईं कहिँ न कहिँ उभिनै पर्छ,’ उनले भने,’तर त्योभन्दा पहिले जब अनावश्यक ढंगले कहीँ उभिने पर्ने अवस्था आउँदैन भने किन उभिने? पार्टीको निर्णायक बेलामा आफ्नो मत जाहेर गर्ने क्रममा हामी भाग्दैनौं।’
अहिले शीर्ष नेताहरूबीच अन्तरविरोध भएको भन्दै उनले समस्याको समाधान माथिबाटै गरिनु पर्ने बताए। सांसदहरूलाई हस्ताक्षरमा उभ्याउनु, सडकमा एक-अर्काका पक्षमा नाराबाजी गर्नु गलत रहेको भट्टराईको भनाइ छ।
‘हिजो पार्टी एकता गर्ने क्रममा पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूको समझदारीमा जिम्मेवारी र पद विभाजन भएको हो। त्यसमै समस्या छ भने तलका नेता/कार्यकर्तालाई किन साक्षी बकाउने?’ उनले भने,’हिजो दुई अध्यक्ष बन्ने बेलामा कोही साक्षी बकेन। आज किन कार्यकर्ता विभाजन हुने? यसमा हाम्रो तहबाट केही गर्न सकिन्छ भने हामी तयार छौं।’
नेकपाभित्रको विवादबारे मन्त्री भट्टराईसँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले गरेको भिडिओ कुराकानीका मुख्य बुँदा यस्ता छन्:
-पार्टीको विवाद समाधानका लागि केही शुभ संकेत देखिएका छन्। अहिले दुई अध्यक्षबीच सकारात्मक कुराकानी भइरहेको छ। अहिले नै समाधान निस्किएको छैन तर बैठक सारिएको यसकै लागि हो।
-प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएका आरोप र प्रधानमन्त्रीले लगाएका आरोपबारे पार्टीमा छलफल हुनपर्छ। त्यहीँबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ।
-दुई अध्यक्षले एक अर्कालाई गम्भीर आरोप पनि लगाउनुभयो। त्यो राम्रो भयो किनकी यसले मन माझिएको छ। अहिले संवाद भएको छ।
-अहिले सहमतिको सुत्र यही होला भनेर ठोस ढंगले म भन्न सक्दिनँ। केही कमरेडले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै छोड्न पर्छ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा बदनाम गरिएको काम गर्न नदिएको भन्नुभएको छ। जसले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा मागेका छन् उहाँहरूले पनि कारण भन्न सक्नपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यी गलत छन् भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ।
-पार्टीमा संख्यात्मक आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ। तर पार्टीलाई त्यो ठाउँमा पुग्न दिन हुँदैन। अहिले यो समय होइन। अल्पमत र बहुमतभन्दा पहिला अरू विकल्पमा जानुपर्छ।
– हरेकले पार्टी निर्णय मान्नुपर्छ। यो सामान्य अवस्था होइन। यतिबेला अल्पमत र बहुमतभन्दा पहिला अरू विकल्प सोच्नपर्छ। विकल्पमा पुग्न सकिँदैन भने पार्टी बन्धक भएर बस्न सक्दैन। पार्टीले आफ्नो कोर्स लिन्छ त्यो कोर्स प्रधानमन्त्रीका निम्ति अप्रिय हुनसक्छ अथवा अरू नेताका लागि अप्रिय हुनसक्छ तर त्यहा पुग्नुभन्दा पहिला सबै अरू उपाय लगाउनु पर्छ।
– हामी दोस्रो तहका नेताकै छलफलले बैठक स्थगित गरेर टुटेको संवाद सुरू भएको हो। हामीले अरु गर्न नसके पनि संवादहीनतालाई तोडेका छौं। तर परिणाम नआइकन यसै भन्न सकिँदैन। जस्तोसुकै प्रतिकूल परिणाम पनि आउन सक्छ। त्यो आउन नदिन हरेक प्रयास गर्नुपर्छ।
– नेताहरूमा सूचनाको आधिकारिकतामा समस्या छ। एकका विरूद्ध अर्कालाई उचालिन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा यस्तै भयो। अरू नेताहरूले पनि अनावश्यक आशंका गरेका छन्। यो सबै सूचनाकै आधिकारिकतामा आएको समस्याले भएको हो।